Fametahana bilaogy: Netglobalbooks | Martech Zone
Fametahana bilaogy: Netglobalbooks
Alakamisy, Jolay 19, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Manaraka izany ao amin'ny lisitra misy ny fametahana bilaogy dia i Linda Lee sy ny bilaogy Netglobalbooks. Linda dia mpandraharaha ary reny tokan-tena manan-janaka telo lehibe. Nanomboka nivarotra boky sy kilalao ary tapakilan'ny kaonseritra tamin'ny eBay i Linda, ary izany dia mitarika amin'ny fanoratana sy fivarotana ebook ary famoronana tranokala.
Mahafinaritra ny bilaogin'i Linda - miaraka amin'ny lohahevitra Paintbrush avy amin'i Antbag.
Ireto misy toro-hevitra amin'ny bilaoginao, Linda:
Manoro hevitra ny hanavao ny kinova an'ny WordPress amin'ny kinova farany sy lehibe indrindra.
Nahita hafahafa roa miaraka amin'ny lohahevitrao aho. Ao amin'ny pejy fanondroana anao, ny lahatsoratrao dia manomboka amin'ny> p /> ary toa misy marika font tsy misy dikany miverimberina aorian'ny atiny tsirairay avy.
Tokony ho hitanao ny mari-pamantarana endri-tsoratra amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny pejy fanondroana anao ao amin'ny editor amin'ny lohahevitra WordPress. Ny tag funky dia mety ao amin'ny atiny.
Manana rohy maty amin'ny forum ianao ao amin'ny blogroll anao ao amin'ny sisin-tranonao. Raha mila forum iray miasa amin'ny WordPress ianao dia afaka manandrana bbPress. Ilay namako bilaogy Tony Chung dia nameno izany ary mandeha tsara eo amin'ny tranokalany, Geekwhat.
Tsikaritro rehefa manoratra ianao fa manana fifangaroan'ny tagan'ny paragrafy (> p>) sy ny fiatoana tsipika (> br />). Ny fahatapahana tsipika dia hanapaka ny tsipika ary hanohy anao amin'ny andalana manaraka tsy misy padding na sisin-dàlana. Andininy; na izany aza, avelao ny padding mahafinaritra etsy ambony sy ambanin'ny fehintsoratra atiny. Ny andininy dia mamaky tsara ny atiny - manamora ny famakiana ny atiny. Hialako ny fiatoana tsipika.
Tsy misy mari-pamantarana data momba ny meta ao amin'ny lohanao. Meta angon-drakitra dia ampiasain'ny Search Engine mba hampisehoana fampahalalana momba ny teny lakile sy ny famaritana momba ny tranokalanao sy ny pejinao tsirairay. Izaho dia mandrisika mametaka plugins roa hanampy anao amin'ny fametrahana ny teny lakileo sy ny mari-pamantarana meta!
Mipetraka tsara ny kisary fahana RSS-nao! Mba hahazoana antoka fa mahasarika ny mpamaky amin'ny fahana RSS anao ianao, azoko atao ny manoro hevitra ny hisoratra anarana Feedpress ary mameno ny plugin WordPress Feedburner.
Mba hanampiana ireo milina fikarohana amin'ny fitetezana mora kokoa ny bilaoginao, dia tena mamporisika anao ny hametraka a Plugin mpamorona tranokala. Ny tiako indrindra dia ny kinova beta - mihazakazaka be izy io ary tsy mbola nanana olana. Satria ao amin'ny subdirectory ny bilaoginao, rehefa manamboatra sitemap anao ianao dia aza hadino ny manavao ny rakitra robots.txt anao amin'ny toerana misy azy io:
Raha sendra olana ianao dia misorata anarana Google Search Console hahazoana torohevitra vitsivitsy!
Iza i Linda Lee? Aiza ny sary? Aiza ny sary? Ny fanaovana bilaogy dia traikefa an-tsary toy ny famakiana iray ihany. Ny olona mirona hifandray tsara amin'ny olona fa tsy amin'ny soratra. Tsy manana sary eo amin'ny lohateny aho satria mpampihomehy… Manana izany aho mba hahatsiarovanao ny tavako ary angamba hatoky ahy bebe kokoa ianao.
Hofafazako clipart na sary ihany koa ny lahatsoratranao mba hanavahana azy amin'ny bilaogy hafa ary hanomezana masoko kely kokoa ny atiny. Ampiasao ny bala sy ny lohateny (h2, h3) ao anaty ny atiny mba hahafahan'ny mpamaky mandinika azy io mora kokoa.
Linda, manao asa mahafinaritra ianao amin'ny bilaogy tanora toy izany. Tsy tokony hatsipinao mandritra ny alina ireo fanatsarana rehetra ireo - makà fotoana. Hita fa mankafy ny asa soratanao ianao ary mahalaza olona sy mampahalala vaovao. Tohizo izany ary ampio roa ireto fanitsiana ireto rehefa mandeha ny fotoana - hahazo tombony amin'ny mpamaky ianao ary amin'ny fahitana ny motera fikarohana.
Mirary anao ho tsara vintana! (Avy amin'ny raim-pianakaviana tokan-tena!)
Tags: fametahana bilaogytoro-hevitra amin'ny bilaogyLindanetblobalbooks
Fanaraha-maso ny fametahana bilaogy: ny mpanazatra ny bilaogiko avy amin'i Shonnie Lavender
Jolay 19, 2007 amin'ny 10:35 PM
wow doug, naka an'io plugin generator sitemap io aho ary mahafinaritra, efa nalefako tany amin'ny google ny sitemap, toa mandeha tsara izy io ka thanx indray amin'ny torohevitrao ... toro-hevitra amin'ny bilaogy , heveriko fa mihatsara aho 🙂
Jolay 19, 2007 amin'ny 11:16 PM
bbpress rocks! misaotra an'i Doug!
Jolay 20, 2007 amin'ny 7:00 PM
Wow misaotra anao amin'ny fanampiana rehetra sy rohy sy soso-kevitra lehibe.
Niasa tamin'ny sasany tamin'izy ireo aho androany ary niasa tamin'ny sary aho, ary nanavao ny pejy momba ahy aho.
Hametraka ireo plugins natoronao aho ary nanao lahatsoratra bilaogy momba anao aho!
Ao amin'ny lisitry ny bilaogiko koa ianao izao.
Misaotra indray amin'ny zava-drehetra!
Jolay 21, 2007 amin'ny 2:09 PM
Tena tsara ianao Linda! Misaotra betsaka tamin'ny fampidirana ahy tao amin'ny blogroll – tena fiderana izany!!!
Jolay 26, 2007 amin'ny 2:46 PM
Vao avy nividy boky momba ny safidinao aho.
Mbola tsy nandre momba an'io lehilahy io aho ary namaky ny tsikera Amazon aho ary ity no karazana bokiko. “Antenaina ny tsy ampoizina”
(Nandeha tany amin'ny Ebay aho ary nividy azy, miala tsiny amin'izany) fa napetrako tao amin'ny tranokalako koa izany amidy amin'ny Amazon.
28 Septambra 2007 à 3:55
Roger dia manana ny azy bilaogy manokana, koa! Lehilahy mampiala voly tokoa izy. Tiako io boky manokana io anefa!
Misaotra nampahafantatra ahy!